Somaliland: Beesha Caalamka Oo Walaac Ka Muujisay Dib U Dhaca Mar Saddexaad Ku Yimid Doorashooyinkii Somalilan - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Beesha Caalamka Oo Walaac Ka Muujisay Dib U Dhaca Mar Saddexaad...
Somaliland: Beesha Caalamka Oo Walaac Ka Muujisay Dib U Dhaca Mar Saddexaad Ku Yimid Doorashooyinkii Somalilan
Dib-U-Dhigidda Doorashooyinka Madaxweynaha Iyo Baarlamaanku Waxay Toos Uga Hor Imanaysaa Go’aankii Maxkamadda Sare
“Abaartu Waa In Aanay Noqon Geed Loogu Soo Gabbado Dib-U-Dhigidda Doorashada Taas Oo Khatar Gelinaysa Dimoqraadiyadda Soomaalilaan”
Deeq bixiyeyaasha Somaliland ka caawiya arrimaha dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ayaa walaac iyo werwer badan ka muujiyay dib u-dhaca mar saddexaad dawladda Somaliland dib ugu dhigtay doorashooyinkii la filayay inay dalka ka qabsoomaan sanadkan aynu ku jirno bisheeda saddexaad. Deeqbixiyeyaasha ayaa ku hanjabay inaanay bixin doonin kharashka ku baxaya doorashooyinka Somaliland haddii ay dib uga dhacaan doorashooyinku muddadii loogu talogalay ee ahaa go’aankii maxkamadda sare kasoo baxa. Waxay sidoo kale ay shegeen inay ka war hayaan abaaraha xooggan ee dalka ka jira oo ay kaalmo hiil iyo hooba ah la garab taagan yihiin, balse aanay noqon mid ay xukuumaddu marmarsiiyo ka dhigato.
Qoraal luuqada Ingiriiska ku qoran oo lasoo barta Internet-ka oo Hubaal Af-somali usoo turjumay ayaa u dhignaa sidan:
“Beeshu caalamku waxay si mug leh uga dambqanaysaa abaarta xooggan ee ku dhufatay geyiga Soomaalilaan. Iyagoo taas ka duulaya, deeq-bixiyayaashu waxay kaalmo hiil iyo hooba la garab taagan yihiin dadka reer Soomaalilaan ee ay abaartani saamaysay isla markaana walaac iyo werwer badan ayay ka muujinayaan arrintaas deeq-bixiyayaashu.
Dhibaatooyinka kakan ee abaartan waddanka ku habsatay waa kuwo aan la dafiri Karin ama la daadifayn Karin isla markaana taabtay bulshada iyo ashkhaastaba. Sidaas daraaddeed, waxa loo baahan yahay in sida ugu dhakhsaha badan ay uga jawaabto ugana falceliso dawladda Soomaalilaan iyadoo adeegsanaysa beesha caalamka. Ka hawl-gelidda abaartan waxay u baahan tahay hoggaan adag iyo dedaal xooggan oo laga rabo Qaranka Somaliland.
Sida ay kaga dhawaajiyeen daneeyayaasha Soomaalilaan todobaadkii hore magaalada Hargeysa, abaartu waa in aanay noqon geed loogu soo gabbado dib-u-dhigidda doorashada taas oo khatar gelinaysa dimoqraadiyadda Soomaalilaan. Beeshu caalamku si weyn ayay uga walaacsantahay go’aankii madaxweynaha Soomaalilaan, madaxda xisbiyada iyo guddida doorashooyinka kaas oo tibaaxayay in doorashooyinka Madaxweynaha dib loo dhigo illaa 10ka Oktoobar, 2017 ka. Qabashada doorashooyinka golaha deegaanka iyo wakiillada Soomaalilaan ee dib loogu dhigay 10ka Octoobar, 2017 waxay keenaysaa in xildhibaannada golaha wakiilladu sii joogaan xafiiska isla markaana dhammaystirtaan 12 sanno oo xidhiidh ah.
Dib-u-dhigidda doorashooyinka madaxweynaha iyo baarlamaanku waxay toos uga hor imanaysaa go’aankii maxkamadda sare ee 18 kii Ogost, 2015 ka.
Sidoo kale, dib-u-dhigidda doorashooyinka deegaanka oo ah sabab la’aan waxay dhaawacaysaa kalsoonidii beesha caalamka ee dimoqraadiyadda Soomaalilaan.dib-u-dhacyadan ku imanaya doorashooyinka Soomaalilaan waxay daba socdaan su’aalo layska weydiinayo dimoqraadiyadda Soomaalilaan – tusaale haddaad dib u xasuusato doorashadii madaxweynaha waxa la qorsheeyay inay dhacdo 2015 kii.
Iyadoo aan ognahay sida ay beesha caalamka uga go’an tahay horumarinta Soomaalilaan, dib-u-dhigiddan doorashooyinka waxa ay keenaysaa isla markaana ku qasbaysaa beesha caalamka inay dib uga fiirsadaan wada-shaqayntii ay la lahaayeen Soomaalilaan. Beesha caalamku waxay taageero mug leh u fidisay guddida doorashooyinka si doorashoooyinka ay waqtigoodii ugu qabtaan. Haatan waxa dhici karta in xitaa dadkii laga soo qaadayay lacagta ay genafka ku dhuftaan. Beesha caalamku waxay idiin caddaynaysaa in aanay bixin doonin kharashka doorashooyinka haddii dib loo dhigo.
Beeesha caalamku waxay ku adkaynaysaa dawladda Somaliland, saddexda xisbi qaran iyo komishanka doorashooyinka qaranka inay dib isula eegaan dhawaaqii dhawaan, isla mar ahaantaana isu diyaariyaan doorashada madaxtooyada oo qabsoonta sanadkan aynu ku jirno horaantiisa. Waxaanu ugu baaqaynaa maxkamadda sare iyo gulaha guurtidaba inay dib u eegaan go’aankaasi.
deeqbixiyeyaashu waxay sidoo kale ugu baaqaysaa xukuumadda Somaliland inay diyaariso oo ay qabato doorashooyinka baarlamaanka isla sanadkan aynu ku jirno 2017-ka.
Dhawaaqa dib u-dhiista doorashada ee mar saddexaad waxa uu hoos u dhigaya meeqaamkii iyo Sumcadda Somaliland ku leedahay bulshada caalamka, waxaanay halis ku noqonaysaa dimuqraadiyadda Somaliland.
Waxaannu ka codsanaynaa dhamaan daneeyayaasha in ay sameeyaan dadaal kasta si ay u ilaaliyaan aqoonsiga dimuqraadiyadda Somaliland.
Waddamada somaliland ka caawiya dimuqraadiyadda iyo arrimaha doorashooyinka ee bayaankan soo saaray
Somaliland: Shirweynihii Golaha Dhexe Ee Xisbiga WADDANI Oo Kaabiga Ina Soo Saaray Iyo Muran Kasoo Kordhay Goobta Lagu Qabanayo Oo Xisbiga Laba U Kala Jabiyey
Deg Deg: Madaxweyne Siilaanyo “Ceelna Uma Qodna, Cidina UMa Maqna” Maxa Ku Cusub Maanta Qasr,,
Somalia: Madaxweyne Farmaajo Oo Raali-Gelin Ka Bixiyay Dhiibistii Qalbidhagax
Somaliland: Xisbiga Waddani Oo Xukuumada Somaliland U Eedeeyey In Ay Si Qarsoodi Ah Ku Bilowdey Wada Hadaladii Lagula Jiray Somaliya
Somaliland: Garabka Dhallinyarada Xisbiga KULMIYE Oo Deeq Lacageed Ku Wareejiyey Guddida Abaaraha Ee Heer Qaran